Budata Ice Adventure APK maka Android
Budata Ice Adventure
Budata Ice Adventure,
Ice Adventure bụ egwuregwu ịgba ọsọ na-adịghị agwụ agwụ nke mkpanaka nke ị nwere ike ịnụ ụtọ igwu egwu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ikpori ndụ.
Anyị na-ahụ ihe omume nke dike anyị Snowdy na Ice Adventure, egwuregwu ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ekwentị gị na mbadamba nkume site na iji sistemụ arụmọrụ gam akporo. Nịbụ ndị bi nala ice, Snowdy ga-agbaji ọnụ ụzọ ice ka ọ bụrụ onye ndu nke mpaghara a. Anyị na-enyere dike anyị aka ịrụ ọrụ a.
Ice Adventure bụ egwuregwu dị mfe. Naanị ihe anyị ga-eme negwuregwu ahụ bụ ịwụpụ ihe mgbochi ma jiri dike anyị mebie ọnụ ụzọ. Anyị na-eme ka dike anyị na-awụlikwa elu ka ọ na-agba ọsọ ma dochie ihe mgbochi. Anyị nwere ike ịnakọta ọla edo nụzọ anyị. Na mgbakwunye, anyị nwere ike nweta nnukwu ikike nwa oge site na ịnakọta ego dị iche iche.
Ị nwere ike iji ọla edo ị na-anakọta na Ice Adventure zụta ọkụ ọkụ. Ka ọnụ ụzọ ị na-agbaji na egwuregwu ahụ, ka akara gị ga-adị elu.
Ice Adventure Ụdịdị
Mmepụta: Ice Adventure